Iqaqambile, icocekile kwaye ivulekile. Ikhaya lakho kude nekhaya
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguMelissa
Iza kusetyenziswa nguwe yonke le igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle.
Igumbi elikhulu, elicocekileyo, elikhululekile le-studio lesitayela sasekhaya elisezantsi esandula ukwakhiwa ngo-2018. Le ndawo ixhotyiswe ngeKitchenette (iindlela zokupheka, i-cookware, izixhobo njl. njl.) ekhaya kude nekhaya. Ukuba undwendwela iCleveland, ujinga nabahlobo okanye udlula nje ndinebhedi ethambileyo, netofontofo yakho kwesi sixeko sihle, sikhuselekile kwaye sikwimeko entle sikwindawo efanelekileyo kwiimfuno zakho.
Igumbi elingaphantsi kwesitayile sestudio likwindawo entle, enobuhlobo kusapho, nekhaya elinobuhlobo. Inkulu, iqaqambile, yonwabile, ishushu, icocekile, Imnandi kwaye inayo yonke into onokuyidinga. Igumbi lokulala lineebhedi ezimbini ezigcweleyo (i-1 i-memory foam umatrasi omtsha). Ukongeza kukho i-sofa ye-Sleeper (kunye ne-foam yememori) kunye ne-queen air bed (ngesicelo) kumaqela amakhulu. Igumbi lakho lokuhlambela labucala / elingabelananga ngalo libekwe ngqo phezulu kwizinyuko ezisezantsi (izinyuko ezi-5) ULiz yindlu enemigangatho emininzi. Sabelana ngomnyango ongasemva kumgangatho osezantsi ukusukela oko ndipaka kwigaraji yam esemva kwendlu yam. Iindawo zethu ezahlukeneyo zibekwe kanye ngaphakathi kwendlela yokungena eyahlulwe yingcango yethu kunye nezinyuko :)
2 iibhedi ezilala abantu ababini, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
1 iisofa eziyi-, umatrasi ompontshwayo oyi- 1
Bonisa zonke 71 izinto onokuzisebenzisa
4.87 out of 5 stars from 98 reviews
4.87 · Izimvo eziyi-98
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi98
IWestlake sisixeko esihle, esikhuselekileyo esikwindawo entle enayo yonke into oyifunayo kwimizuzu nje. Ku malunga nemizuzu eyi-10 ukusuka eCleveland, i-50 min ukusuka eSandusky (indawo yomsedare), i-6 min ukuya eLakewood kubomi basebusuku kwaye ngaphantsi kwe-10 min drive ukuya eHuntington Beach!
Umbuki zindwendwe ngu- Melissa
Ujoyine nge- 2017 Novemba
I love hosting people and meeting new people and I’m also kind of a homebody so my Airbnb has been a huge highlight in my life :)
Ndenze abahlobo abaninzi ubomi kunye neenkumbulo ngokuhlala kunye neendwendwe ebusuku kwiveranda yam evuthayo okanye kwindawo yomlilo ngelixa ndibelana ngewayini, iibhiya, umculo, ukuhleka kunye namabali ... Ndineendwendwe ezininzi ezikhetha ukuzigcina. okanye ndineshedyuli exakekileyo, ndiyahamba nje :)
Ndenze abahlobo abaninzi ubomi kunye neenkumbulo ngokuhlala kunye neendwendwe ebusuku kwiveranda yam evuthayo okanye kwindawo yomlilo ngelixa ndibelana ngewayini, iibhiya, umculo,…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Westlake